ငြိမ်းချမ်းရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အစိုးရအချင်းချင်းသာမက ပြည်သူနှင့်ပြည်သူ အချင်းခ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ဝ
ငြိမ်း ချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ အလွန်အရေးပါပြီး အစိုးရအချင်းချင်းသာမက ပြည်သူနှင့်ပြည်သူအချင်းချင်းပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရမည်ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်။ နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ရက်ကနေပြည် တော်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၁၃) ကြိမ်မြောက် အေဆမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် အ ဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ယင်းကဲ့သို့ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ”ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ ငြိမ်းချမ်း ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မကျဆင်း ရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကို ပူးပေါင်းအားထုတ်ကြိုးပမ်းမှ အောင်မြင်မှုရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့အစည်း အဝေးကို ကျွန်မတို့အဆိုပြုလိုတဲ့ အချက်ကတော့”ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မကျဆင်းရေးအတွက် ခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို လုပ်ဆောင်ကြပါ”ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အေဆမ်ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂ဝ လောက်ခရီးစဉ် မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ အလွန့်အလွန်အရေးကြီးတဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တူညီတဲ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ တက်ကြွမှုကိုတိုးတက်အောင် အေဆမ်ရဲ့ထောက်ကူမှုနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံ ပြီး ပြဿနာပေါင်းစုံကို ရင်ဆိုင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာဒီပူး ပေါင်းမှုကို ဆက်လက်ပြီးအားပေး သွားရမှာဖြစ်ပြီး ဆက်ဆံမှုအသစ် တွေကိုလည်း ဖော်ဆောင်သွားကြရ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအချင်းချင်း ပူးပေါင်းမှုသာမက ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းတွေသာမက ပြည်သူနဲ့ပြည်သူအချင်းချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကိုပါ ထူထောင်သွား ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။
(၁၃) ကြိမ်မြောက် အေဆမ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအ ဝေးကို အာရှနှင့်ဥရောပတို့အကြား ဆက်သွယ်ရေး၊ မိတ်ဖက်ပြုမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် သဘောတူခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံ ၅၁ နိုင်ငံမှ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံအကြီးအကဲများက ယုံကြည် စွာအပ်နှံထားသော လုပ်ငန်းများကို ပြီးမြောက်စေရန်၊ ကတိကဝတ်များကို ရှင်းလင်းပြောဆိုရန်အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားရာတွင် ”ဒီနေ့မှာ မျက်နှာစုံညီအစည်း အဝေးနှစ်ခုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအစည်းအဝေးမှာ ”ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အဓွန့်ရှည်ခိုင်မြဲမယ့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ငြိမ်း ချမ်းရေးတိုးမြှင်ရေးနဲ့ ထိန်းသိမ်း ရေး၊ အဓွန့်ရှည်ကြာမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အကြောင်း အလေးပေး မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယမြောက်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးအဓိကအကြောင်း အရာကတော့ ” ASEM တတိယ မြောက်ဆယ်စုနှစ်ကာလ ASEM ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်ပြီး ချိတ်ဆက်မှုရှိစေရန်လုပ် ဆောင်ခြင်း” ဖြစ်ပြီး တတိယမြောက်ဆယ်စုနှစ်ကာလအတွက် ASEM ရဲ့ ထိရောက်မှုနဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတို့မြှင့်တင်ရေးဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်လမ်းများကို ရှာဖွေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေကျ အေဆမ်ရဲ့လုပ် ဆောင်ချက်များနဲ့အတူ မနက်ဖြန်မှာ နောက်ဆက်တွဲအစည်း အဝေးကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး တစ်မနက်လုံးမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒေသတွင်းရေး ရာကိစ္စရပ်တွေအကြောင်း လွတ်လပ်တဲ့အလုပ်သဘောဆွေးနွေးကြ မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုဆက်လက် ပြောသည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ASEM နောက်ဆုံးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အာရှနဲ့ ဥရောပတို့ကြား ဆက်သွယ်ရေး၊ မိတ်ဖက်ပြုမှုနဲ့ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ပိုမိုမြှင့်တင်ဖို့ အတူတကွ လုပ်ကိုင်ကြရန် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ၅၁ နိုင်ငံမှ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံတော်အကြီး အကဲများမှ ယုံကြည်စွာအပ်နှံခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများကို ပြီးမြောက်အောင် မြင်စေရန်ကတိကဝတ်တွေကို ရှင်းလင်းပြောဆိုရန် ရောက်ရှိလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထောင်နှင့်ချီသော ခရိုအေးရှား လက်ယာစွန်း ဝါဒီများ နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက် တစ်ခုကို ကန့်ကွက??